Kumaa loo doortay xiddiga xilli ciyaareedka 2019/20 ugu fiicnaa Kooxda Bayern Munich?… (Ma Alphonso Davies mise Lewandowski?) – Gool FM
Afar ciyaaryahan iyo Madaxweyne Koox oo Shil Diyaaradeed ku geeriyooday
Luis Suarez oo ku celiyay guul uu horrey u gaaray Cristiano Ronaldo
Xiddig ka tirsan Paris Saint-Germain oo xaqiijiyey in Kooxdu ay isku dayayso inay la saxiixato Lionel Messi
Klopp oo sharaxaad ka bixiyay sababta ay Liverpool guuldarro uga soo gaartay Man United kulankii FA Cup-ka
RASMI: Isku aadka 16-ka Kooxood ee FA Cup-ka oo la sameeyey… (Yey ku beegmeen Man United, Man City & Chelsea?)
Muxuu Solskjær ka yiri kaddib guushii cajiibka aheyd oo ay Man United ka gaartay Liverpool?
Kumaa loo doortay xiddiga xilli ciyaareedka 2019/20 ugu fiicnaa Kooxda Bayern Munich?… (Ma Alphonso Davies mise Lewandowski?)
Haaruun September 16, 2020
(Munich) 16 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey ciyaaryahanka loo doortay inuu ahaa xiddiga xilli ciyaareedka ugu fiicnaa kooxda Bayern Munich, iyadoo ay ku tartameen dhowr xiddig oo bandhig wacan sameeyey.
Weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski ayaa loo codeeyey inuu yahay xiddiga xilli ciyaareedka ee Kooxda Bayern Munich.
Lewandowski oo kaalinta koowaad galay ayaa helay 51% codadkii la dhiibtay, halka kaalinta labaad uu ka soo muuqday Alphonso Davies oo helay 16% cod.
Kaalinta ugu hooseysa waxaa ka soo muuqday Thomas Müller oo laftiisu shaqo badan u qabtay qeyb libaaxna ka qaatay in kooxdu ay ku guuleysato saddexleey koobab ah, kaasoo helay 13% codadkii la dhiibtay.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida ay xiddigahan u kala heleen codadka ciyaaryahanka xilli ciyaareedka 2019/20 ee kooxda Bayern Munich:-
1- Robert Lewandowski 51%
2- Alphonso Davies 16%
3- Thomas Müller 13%
AUBA oo noqday laacibka ugu Mushaarka badan Premier Legaue.....(EEG Liiska sagaalka laacib ee ku soo xiga)
Mourinho oo markii ugu horreysay ka hadlay wararka Gareth Bale la xiriirinaya Tottenham